Ingqungquthela entsha Yesimo Sezulu izobanjelwa eBonn ngoNovemba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Inhloso Yezingqungquthela Zesimo Sezulu ukuguqula kancane kancane yonke imihlahlandlela namaphuzu azobhekelelwa ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu ngokuqalisa kweSivumelwano saseParis.
Ingqungquthela elandelayo Yesimo Sezulu (COP23) izobanjelwa eBonn ngoNovemba olandelayo. Le COP23 ihlose ukuqhubekisa phambili ekulungisweni kweSivumelwano SaseParis futhi ikhombise, ngaphezu kwakho konke, ukuthi kunesidingo nobunye bamanye amalungu esivumelwano, ngemuva kwesinqumo saseMelika sokusishiya. Yiziphi izici le COP23 enazo?
1 Ingqungquthela Entsha Yesimo Sezulu
2 Ingqungquthela yeBonn
Ingqungquthela Entsha Yesimo Sezulu
UNgqongqoshe Wezemvelo waseJalimane, uBarbara Hendricks, ukuqinisekisile ukuthi iCOP23 ihlose ukuqhubeka nokulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu, kube yisibonakaliso esicacile sezepolitiki. Ngamanye amagama, lifuna ukudlulisa isidingo kubo bonke ohulumeni emhlabeni ukulwa nokuguquka kwesimo sezulu.
"Sisesimweni esikhethekile ngoba yingqungquthela yokuqala yesimo sezulu ngemuva kokumenyezelwa nguMongameli waseMelika uDonald Trump ukuthi I-US izosilahla isivumelwano seParis. Lokhu kumayelana nokuthumela uphawu olucacile lwezepolitiki lobunye, "esho.
Amalungu amaningi eSivumelwano SaseParis asaba lapho ebona ukuthi uTrump ushiye isivumelwano seParis. I-United States injalo imbangela yokukhishwa kwamagesi abamba ukushisa omhlaba okungu-25%. Kodwa-ke, i-United States ayisenalo uhlobo lwebhondi esemthethweni uma kukhulunywa ngokunciphisa ukukhishwa kwayo. Ukwesaba okucishe kujwayelekile emalungwini eSivumelwano SaseParis ukuthi bakholelwa ukuthi ukuhamba kukaDonald Trump kuzodala umthelela omkhulu.
Le-COP23 izozama ukubheka ukuthi amazwe kufanele azethule kanjani izinhlelo zawo zokwenza ukuthi kufudumale ukufudumala komhlaba, ngendlela esobala neqhathanisekayo. Ngaphezu kwalokho, kuzoba nezingxoxo zokubona ukuthi amazwe azoqinisa kanjani lezi zinhlelo aqukethe ukufudumala kwembulunga yonke. Izinhloso zokunciphisa igesi engcolisa izinga lokushisa kumele ziqhubeke zifuna ukuvelela, njengoba imiphumela eqondile yokuguquka kwesimo sezulu iya ngokuya icaca.
Manje kumayelana nokuthatha izinyathelo nokuqala ukuthatha izinyathelo zesenzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ingqungquthela entsha Yesimo Sezulu izobanjelwa eBonn